အသားလို အရိုးတောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » အသားလို အရိုးတောင်း	28
Posted by Ma Ma on May 16, 2015 in Creative Writing, Literature/Books | 28 comments
မြန်မာစာမှာ “လည်းကောင်း” ရဲ့ အသံထွက်က “၎င်း” နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် “၎င်း” နဲ့ “လည်းကောင်း” ကို အသုံးလွဲတတ်ကြပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်တော့ ၈တန်းရောက်မှ မြန်မာစာဆရာမရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် “၎င်း” နဲ့ “လည်းကောင်း” ကို ကွဲကွဲပြားပြား သိလာခဲ့ရပါတယ်။
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးက တရားဟောတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးတွေနဲ့ ဖြည့်စွက်ပြီး ဟောလေ့ရှိပါတယ်။
ဘာသာစကားတစ်ခုကို နောက်ဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြလိုက်တဲ့အခါ ပိုမိုရှင်းလင်းပြီး နားလည်လွယ်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
“၎င်း” ကို “That, This”
“လည်းကောင်း” ကို “also” လို့ ပြောရမလား။
မြန်မာစာမှာ “၎င်း” ကိုတော့ ရှေ့ကပြပြီးတဲ့ ပုဒ်အစုကိုအစားထိုးပြီး သုံးပါတယ်။
၎င်းကျောင်းသားများကို အတန်းပိုင်ဆရာမက ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံးခန်းသို့ ခေါ်သွားသည်။
ဒုတိယစာကြောင်းမှ “၎င်း” က ကျောင်းပြေးသော ပုဒ်အစုကို ဆိုလိုပါတယ်။
တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အလားတူတွေကို စုစည်းပြချင်တဲ့အခါမှာ “လည်းကောင်း” ကို သုံးပါတယ်။
ကုန်းနေသတ္တ၀ါ ကြက်သည် တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။
လေတွင်ပျံသန်းနိုင်သော ငှက်သည် တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။
ရေနေသတ္တ၀ါ ငါးသည် တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည် လို့…… စာတစ်ကြောင်းချင်း ရေးမယ့်အစား
ကုန်းနေသတ္တ၀ါ ကြက်သည်လည်းကောင်း၊ လေတွင်ပျံသန်းနိုင်သော ငှက်သည်လည်းကောင်း၊ ရေနေသတ္တ၀ါ ငါးသည်လည်းကောင်း တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ကြသည်။
“လည်းကောင်း” ဆိုတဲ့ စကားဆက်ကိုသုံးပြီး တိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ကြက်၊ ငှက်၊ ငါးတွေကို တစ်စုတည်း ပေါင်းရုံးပြီး ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအောင် ရေးနိုင်ပါတယ်။
စဉ်းစားမိတာတစ်ခုက “လည်းကောင်း” တွေအများကြီး သုံးတာကို စာထောက်တယ်ထင်လို့…………………..
ကုန်းနေသတ္တ၀ါ ကြက်သည်လည်းကောင်း၊ လေတွင်ပျံသန်းနိုင်သော ငှက်နှင့် ရေနေသတ္တ၀ါ ငါးတို့သည်လည်း တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ကြသည်လို့ ရေးရင် မှန်သလား။ ရေးလို့ရသလား သိချင်မိတယ်။
ရွာထဲမှာ မြန်မာစာကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ ရွာသူားတွေ အများကြီးရှိတာမို့ “လည်းကောင်း” ရဲ့ အသုံးကို ပိုပြီး သိချင်မိလို့
အသားလိုလို့ အရိုးတောင်း လိုက်ပါတယ်။ About Ma Ma
မြစပဲရိုး says: . မြန်မာ-ရင်းဂလိပ် အဘိဓ္ဓါန် အားကိုး နဲ့ ရွှီးဗျစေ။
လည်းကောင်း – /lagaun:/ conj – as well; also; both လို့ ဆိုထားလေတော့ …..
Cambridge dictionary ကို ဆက်ကြည့် ရပါတယ်။
အဲ့မှာက ဒီလို ရှင်းထားတယ်။
Also is commonly used in writing, but is less common in speaking. Also occupies different positions inasentence.
We use also in front position to emphasise what follows or to addanew point or topic:
We use also in the normal mid position for adverbs, between the subject and main verb, or after the modal verb or first auxiliary verb,
or after be asamain verb. In this position, the meaning of also usually connects back to the whole clause that comes before:
In end position, also normally connects two phrases. We use as well and too instead of also, in end position, especially in speech:
As well is much more common in speaking than in writing, and is more common in speaking than also.
As well almost always comes in end position:
[Inarestaurant. Customer (A) is ordering fromawaiter (B)]
two people or things together:
They have two children, both of whom live abroad.
Are both of us invited, or just you? Would you like milk or sugar or both?
ကဲ ရှင်းပါတယ်နော် ချစ်မမ …. ဟိ … အတည်ပြောရရင်
တကယ်ဆို လည်းကောင်း ကို ထည့်သုံး ရခြင်း အကြောင်း က ပညာရှိ လို့ပါ။
ကျောင်းတွေ မှာ စာစီစာကုံး ရေးရရင် စာလုံး “သုံးရာ” ရေးပါလို့ ပြောတယ် ဆိုပါစို့။
အဲဒီ “လည်းကောင်း” တွေ ကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း သုံးတတ်လို့ ကတော့ …..
ဒါကြောင့် ပြောတာ ရှေးလူကြီး တွေ အပို ဆာဒါးလုပ်တာမဟုတ်။ အပို လုပ်လို့ ရအောင် ထွင်ထားတာပါဆို။
Ma Ma says: ဒီလို ဒီလို ပညာတွေရနိုင်မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်လေ။ မြန်မာ-ရင်းဂလိအဘိဓာန် က အွန်လိုင်းမှာ ရှိလား။
ရှိရင် လင့်ခ်လေးပေးပါအုံး။ သဂျီးဆီက စာလုံးပေါင်းစစ်ရန်
ဆိုတဲ့လင့်ခ်က သူများတွေ သုံးမသုံးတော့မသိဘူး။
ကိုယ်တိုင်တော့ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ရေးရင် အနည်းဆုံး၁ခါတော့ ကြည့်ရတာချည်းပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: တောင်းရင်အရိုးပဲရမယ်မမရေ
Ma Ma says: နောင်ဆိုကျမပိုစ့်တွေ မဖတ်ဘူးလို့တော့ မနေပါနဲ့နော်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 754
ကျော်စွာခေါင် says: မြန်မာ အဂ္ဂိရတ် ဆရာတို့ သည် ရွှေဖြစ်စေခြင်းအလို့ ငှာ ၊ ရှေးနည်းနာတို့ ကို အသုံးပြုလျှက် သွပ်ဓါတ်ကို အခြေခံပြီး ရွှေကျွေးကာ
ဖိုထိုးကြသည်။ သွပ်နည်းလမ်းကဲ့သို့ ပင်၊ နာ၊ ပြဒါး၊နရဏီတို့ ကိုလည်းကောင်း ၊ ၎င်းနည်းတူ ဓါတ်ကစားကြသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံတို့ တွင်မူ ခေတ်မှီဓာတုဗေဒနည်းပညာများဖြင့် ရွှေကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်ကြသည်။
မြန်မာနည်းတို့ ထက် အရောင်အဆင်းသော်လည်းကောင်း၊ နည်းပညာသော်လည်းကောင်း ပိုပြီးမြန်ဆန်တိကျသည်။
မည်သည့်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်ဖြစ်စေကာမူ ၊ ၎င်းတို့ ကိုလည်းကောင်း ရွှေစင်စစ်စစ်ဟု သတ်မှတ်လို့ မရပေ။
…မှတ်ချက်။ ။ ၎င်းစာပါ အကြောင်းအရာတို့ ကို ဖတ်ပြီး မမ သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ခြားစာဖတ်သူတို့ သည်လည်းကောင်း၊
ကျော်စွာခေါင်လို ခေါင်းမမူးစေပါနှင့်။ ၎င်းနည်းပညာတို့ သည် လူကိုလဲ ခေါင်းခြောက်စေ၏ ။ လက်တွေ့ သော်လည်းကောင်း စမ်းချင်၏ ။
Ma Ma says: ဆြာခေါင်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားစာဖတ်သူတို့သော်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်အား မေတ္တာမပို့ကြပါစေသောဝ်……….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: လေမားမား ဖြေဝါးတား ထွေကစားလား ငွေပွားတအား..
Ma Ma says: -လေမားမား = လေပေး (စာဖြင့်စကားပြောခြင်းဖြင့်)
-ဖြေ၀ါတား = ရေ (၀ါးတား) သောက်ပြီး
-ထွေကစားလား = ကီးဘုတ်ကို ဆော့ကစားခြင်းဖြင့်
-ငွေတအားပွား = သဂျီးအိပ်ကပ်မှ ငွေထွက်စေ….. သတည်းးးးးးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: လူ က မဟုတ်မဟတ် ကို အမှတ်ရတတ်တာ ချစ်မရေ
ဦးကြောင် ပေါင်းးသလို လဂေါင်းး လဂေါင်းး နဲ့ ပေါင်းမိနေလို့ မနည်းးပြင်နေရတယ်။
Ma Ma says: ဘာသာစကားတွေထဲမှာ ဖဘဘာသာစကားတစ်ခုထပ်တိုးသင့်တယ်လို့ ထင်နေတာ ကြာပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: ကုန်းနေသတ္တဝါ ကြက်​သာမက လေ​ပေါ်​ပျံသန်းနိုင်သောငှက်​နှင့်ရေ​နေသတ္တဝါငါးတို့သည်​လည်း တိရစ္ဆာန်​များဖြစ်ကြသည်
Ma Ma says: လည်းကောင်း အသုံးကို ဘယ်စာကို ဥပမာပေးရမှန်းမသိပဲရေးပေးလိုက်တာ။
၎င်း ကတော့ ကြုံတုန်း ဖြည့်ရေးလိုက်တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: ငယ်​ငယ်​က
လည်းကောင်း ကိုရေးရမှာပျင်းလွန်းလို့ ၎င်း နဲ့ ရောကြိတ်​ပစ်​တာ အခါခါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1379
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ပညာယူသွားပါသည်
.တီမမကိုလည်းကောင်း၊ ကိုခေါင်ကိုလည်းကောင်း၊ ၄င်းစာလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Ma Ma says: အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ပေးလို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြုံးရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 138
​ဒေါ် လေး says: ပိုစ်​ ပိုင်​ရှင်​​ရော ​ကောမန့်​ ​ပေးထားတာ​ရော ​
တကယ်​ဗဟုသုတ ရတဲ့ အတွက်​
Ma Ma says: (ပိုစ်​ ပိုင်​ရှင်​​ရော ​ကောမန့်​ ​ပေးထားတာ​ရော ​
အဲဒါ ဒီရွာရဲ့ အနှစ်သာရပါပဲ မလေး ရေ။ စာတွေ (ပိုစ့်ကော၊ ကွန်မန့်ကော)ကနေ ဗဟုသုတတွေ ဖလှယ်နိုင်သလို၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေကိုလည်း တိုးပွားနိုင်ပါတယ်။
သဘောချင်းတူနိုင်သလို၊ သဘောချင်း မတူတော့လည်း မတူကွဲပြားခြင်းကနေ အတွေးသစ်အမြင်သစ်တွေ ရလာနိုင်ပါတယ်။
မလေးကိုလည်း ရွာထဲမှာ အတွေးအမြင်တွေ မျှဝေပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: သကြားလိုပဲ ရော ကြိတ်မိခဲ့တာ ၀န်ခံလို၍ လည်းကောင်း၊
အမွှာညီအမချင်း အားပေးလို၍လည်းကောင်း ဤစာကို ရေးပါသည်။
၄င်းအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်မှာ အသားသည်လည်းကောင်း အရိုးသည်လည်းကောင်း ဆိုလျှင် ပိုလိုက်ဖက်ပါမည်။
Ma Ma says: သကြားနဲ့ရောကြိတ်တယ်ဆို ချိုမှာပဲနော်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ၄င်းအကြောင်းအရာမှာ မြန်မာစာ မြန်စကားနှင့် ပတ်သက်နေပြီး။ ၄င်းအချင်းအရာအတွက် မြန်မာ့စာပေဂုရုကြီးများအားလည်းကောင်း ၊ မြန်မာစာပါမောက္ခများနဲ့ မြန်မာစာ မြန်မာစကားဌာနချုပ်အားလည်းကောင်း တင်ပြပေးပါ့မယ်။
Ma Ma says: အောင်မိုးသူက မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်လာရင် ပေါင်မုန့်ခ အဲ ပါမောက္ခဆိုတာ သိပြီးသားးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ( ၄င်းအကြောင်းအရာမှာ မြန်မာစာ မြန်စကားနှင့် ပတ်သက်နေပြီး။ ၄င်းအချင်းအရာအတွက် မြန်မာ့စာပေဂုရုကြီးများအားလည်းကောင်း ၊ မြန်မာစာပါမောက္ခများနဲ့ မြန်မာစာ မြန်မာစကားဌာနချုပ်အားလည်းကောင်း တင်ပြပေးပါ့မယ်။ )
စကားပြေလို ရေးသွားတာမို့ အဆုံးမှာ စကားပြော ( တင်ပြပေးပါ့မယ် ) အစား
စကားပြေ ( တင်ပြပေးပါမည် ) လို့ ဖြစ်ရမှာပါ ၊ ဟီး ဟီး အလကား ဝင်ရှုပ်ရင်း ၁၂ ကျပ် လာယူတာ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .အနှီ “၄င်း” နှင့် “လည်းကောင်း ”ကိစ္စ ရှင်းသွားစေရန်လည်းကောင်း
Ma Ma says: ရှင်းနေတာကို ရှု့ပ်အောင်လုပ်၊
ရှင်းရင်း ရှုပ်ရင်းနဲ့ ……………
မရှုပ်မရှင်း ဖြစ်သွားတာပဲ ဦးမိုက်ရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: သတ်ပုံတလွဲ ဆြာကျောက်ခဲ မှတ်မိတာကတော့…
” ၎င်း ” ကို ညွှန်းတဲ့နေရာတွေမှာသုံးတယ်…
” လည်းကောင်း ” ကို ခိုင်းနှိုင်းတဲ့နေရာ ၊ တူမျှတန်းညှိချင်ရင် သုံးသတဲ့…
အဟိ … အချဉ်မဟုတ် ဂုဏ်ထူးဦးသိန်းနိုင်နဲ့ ဒေါ်မေငြိမ်းတို့ရဲ့ တပည့်ပါခီည
Ma Ma says: ” ၎င်း ” ကို ညွှန်းတဲ့နေရာတွေမှာသုံးတယ်…
သတ်ပုံတလွဲ ဆြာကျောက်ခဲရဲ့ အဆိုအမိန့်ကို ထောက်ခံသွားပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: ၄င်း – အညွှန်းနာမဝိသေသန
လည်းကောင်း – ပုဒ်ဆက်သမ္ဗဒ္ဓ
အဲ့လိုမှတ်ထားတာပဲ… ထူးထူးခြားခြားသိချင်မိတာက ၄ ဆိုတာ မြန်မာဗျည်း၊ သရ မှာမရှိဘူးထင်တယ်.. မြန်မာဂဏန်း ၄ ကို ငသတ်၊ ဝစ်စနှစ်လုံးပေါက်နဲ့ပေါင်းပြီး လေးကောင်း (၄င်း) ဖြစ်သွားတယ်ထင်မိတယ်.. ဘယ်ကဘယ်လို ဖြစ်တာလာပါလိမ့်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: (ဘယ်ကဘယ်လို ဖြစ်တာလာပါလိမ့်.. )
သူများတွေကို ခေါင်းစားအောင် လုပ်ခဲ့လို့ ၀ဋ်လိုက်ပြီထင်တယ်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနကထုတ်တဲ့ ခရီးဆောင်မြန်မာအဘိဓာတ်စာအုပ်မှာတော့…..
လည်းကောင်း (လဂေါင်း) ရှေ့ပုဒ် နောက်ပုဒ် တို့ကို တစ်ပေါင်းတည်းအနက်ကောက်ယူရန် ပြသည့်စကားလုံး
၎င်း (လဂေါင်း) ထို နှင့်အတူတူ လို့ ရေးထားတယ်။